September 6, 2021 - Achawlaymyar
အငျတာနကျ လုံဝအပိတျမခံရခငျ ဒီနညျးတှနေဲ့ ကွိုပွငျဆငျထားလိုကျပါ အငျတာနကျအတှကျ ပွငျဆငျရနျ အငျတာနကျထိနျးခြုပျခံရ လြှငျ – ပထမဦးစှာ Shutdown ခံရပါလိမျ့မယျ ( အနီရောငျ အဆငျ့ Nug အစညျးအဝေး ဖကျြသလို လာပါမယျ )မညျသညျ့ vpn မှ သုံးမရပါ * Shutdown သဘောတရားနားလညျအောငျပွောရရငျ ဥပမာ – ကိုယျက အငျတာနကျကိုခြိတျဆကျပွီး အသိတဈယောကျကို hotspot ထောငျပေးထားသလို ပေါ့ တဈဖကျက wifi နဲ့ခြိတျပွီး အငျတာနကျကိုသုံးရနပေါလိမျ့မယျ ဒါပမေယျ့ကိုယျက hotspot မပိတျပဲ အငျတာနကျ Data ကိုပိတျလိုကျရငျ တဈဖကျက သူမှာ wifi ခြိတျနပေမေယျ့ အငျတာနကျပွတျတောကျသှားသလိုပါ ဒီလိုသဘောတရားလေးပါ ) – အငျတာနကျ ပွတျတောကျပွီး2… Read more
အိမ်တိုင်းမှာလုပ်လေ့ရှိတဲ့အရာတွေက ပစ္စည်းတွေကို ကြာရှည်စွာသုံးစွဲတာ၊ တစ်ခုခုပျက်စီးသွားရင်ပြန်ပြီးသုံးမယ်ဆိုပြီးလွှင့်မပစ်ရက်ပဲသိမ်းထားတာတွေ၊ အသစ်မလဲပဲပစ္စည်းဟောင်းတွေကို အထပ်ထပ်သုံးစွဲနေတာမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အိမ်ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့သူတွေလုပ်တတ်တဲ့အယူအဆအမှားတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မရှိဘူးထင်ပြီးပစ္စည်းတွေကို သုံးစွဲတာတွေရှိနေတာကြောင့်အိမ်တွင်းပစ္စည်းအချို့ရဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော် (၁) သွားတိုက်တံ သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက်သွားဆရာဝန်တွေကသွားတိုက်တံကို ၃ လကိုတစ်ကြိမ်လဲလှယ်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ၃ လထက်ပိုပြီး ကြာအောင် သုံးစွဲတဲ့အခါသွားတိုက်တံမှာဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ၊ရောဂါပိုးတွေကပ်ညိနိုင်ခြေအများအပြားရှိနေလို့ ၃ လ ထက် ပိုကြာအောင်မသုံးသင့်ပါဘူး။ (၂) တဘက် (သို့) ကိုယ်သုတ်ပုဝါ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ပုဝါတွေကတော့အချိန်ကြာကြာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့်သန့်ရှင်းမှုနဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာရေးအတွက်ပုဝါတွေကိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ထက်ပိုပြီးအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ (၃) ဘီး ဘီးတွေကိုအိမ်တွေမှာနှစ်နဲ့ချီအောင် အသုံးပြုကြလေ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘီးတွေကိုနှစ်တိုင်းအသစ်တစ်ချောင်းလဲပေးသင့်သလိုအပတ်တိုင်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ (၄) ခေါင်းအုံး အိမ်တွေအတော်များများကခေါင်းအုံးတွေကိုနှစ်ပေါင်များစွာကြာအောင်သိမ်း ဆည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းအုံးတွေကနှစ်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပုံသဏ္ဍာန်ပျက်ယွင်းလာပြီးပိုးမွှားတွေနဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေခိုအောင်းရာနေရာဖြစ်လာပြီးသင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခေါင်းအုံးတွေကို ၁ နှစ် ၂ နှစ်ထက်ပိုအသုံးမပြုပဲအသစ်လဲလှယ်ပေးခြင်းကအိမ်အတွက်သန့်ရှင်းမှုရော ကျန်းမာရေးအတွက်ပါအထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ (၅) ရေမွှေး ရေမွှေးကိုနှစ်တွေအကြာကြီးသုံးလို့ရတဲ့ အရာလို့သင်သိထားရင်တော့အဲ့ဒီအသိကမှားပါတယ်။ရေမွှေးတွေကိုပုလင်းအဖုံးဖွင့်ပြီးရင်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကနေတစ်နှစ် … Read more
ဘဝမှာ အကွှေး ၃ မြိုး မတငျစနေဲ့ အကွှေး၃မြိုးလုံး မတငျစနေဲ့ ဘာကွှေးမှ မတငျမိစနေဲ့ လောကကွီးမှာ ဘာကွှေးပဲ ဖွဈဖွဈ အကွှေးတငျရငျ ပွနျဆပျရတယျ။ ဒီဘဝဆပျခငျြဆပျ၊ ဒီဘဝ မဆပျရငျ နောကျဘဝ ပွနျဆပျရမှာပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဘာကွှေးမှ မတငျတာ အကောငျးဆုံးပါ။အကွှေး ၃- မြိုး ရှိတယျလို့ မှတျပါ။ ဥစ်စာကွှေး, နှုတျကွှေး, ဝဋျကွှေး တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီ ၃- မြိုးထဲမှာ ဝဋျကွှေးက ကွောကျစရာ အကောငျးဆုံးပဲ။ ဘာကွောငျ့လဲ၊ ဝဋျကွှေးက ဘဝပေါငျး မွောကျမြားစှာ ပွနျဆပျရတယျလေ။ မွတျစှာဘုရားသညျပငျ အတိတျက လုပျခဲ့တဲ့ အကုသိုလျတှကေို ပွနျဆပျခဲ့ရတယျ။ အဲဒါကိုပဲ ” ဝိပါကျတျော” လို့ ချေါပါတယျ။ “ဝိပါကျတျော ဆယျ့နှဈပါး” … Read more
နာမည်မှာ ‘H’ ပါတဲ့သူတွေဟာ…
နာမည်မှာHပါတဲ့သူတွေဟာ… မသိရင် မာနကြီးတဲ့သူ အတ္တကြီးတဲ့သူ ရင့်ကျက်တဲ့သူတစ်ယောက် လို့ ထင်ရတယ် စိတ်ရင်းနဲ့ ပေါင်းတဲ့သူအပေါ်မှာဆို ကလေး သူတို့က အပေါင်းအသင်းနည်းတယ် ရှိတဲ့အပေါင်းအသင်းကလဲ သူရဲ့ ဒုတိယမိသားစုပဲ လူတိုင်းကို ကိုယ့်စိတ်ရင်းနဲ့ နှိုင်းပေါင်းတတ်လို့ ခနခန လိမ်ညာခံရတယ် သူတို့ အချစ်က ရှားပါးအချစ်… တော်ရုံမချစ်တတ်ဘူး ချစ်ပီဟေ့ဆိုလဲ… လုံးဝ သူမှသူပဲ မရှိမဖြစ်ပဲ သူတို့ရဲ့ အားနည်းချက်တခုက သူများအပေါ်ခခယယ မဆက်ဆံတတ်ကြတာပဲ $ကြောတင်းတယ် ကွယ်ရာမှ ကြိတ်ငိုတဲ့သူမျိုး ကပ်ဖားရပ်ဖားလုပ်ရတာ မုန်းတဲ့သူ မကျေနပ်တာရှိ ဒဲ့ပြောတယ် သူမှန်နေရင် ဘယ်သူ့မှ $ဂရုမစိုက်တတ်ဘူး မိဘပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပေါင်းသင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် သူမှ သူဖြစ်နေမှ ကြိုက်တာ ပထမနေရာပဲ လိုချင်တဲ့သူပါ ဒုတိယနေရာရမယ်ဆို ထိုနေရာမှ ထွက်သွားတတ်တဲ့သူမျိုး … Read more
WIFIလိုင်းကို နှောင့်နှေးစေတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်း(၈)မျိုး…
WiFiလိုင်းကို နှောင့်နှေးစေတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်း(၈)မျိုး… အင်တာနက်လိုင်း ကောင်းတဲ့အခါ ပျော်တဲ့ အပျော်က တခြားအပျော်တွေနဲ့ မတူပါဘူး။ အင်တာနက်လိုင်း မကောင်းရင်လည်း တော်တော် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပါတယ်။ WiFi လိုင်း မကောင်းတာက တစ်ခါတလေ operator နဲ့ သက်ဆိုင်သလို တစ်ခါတလေ ကျတော့လည်း အိမ်သုံး ပစ္စည်းတွေ နဲ့ သက်ဆိုင်နေ ပါတယ်။ 1. သတ္တုမျက်နှာပြင်နှင့် သတ္တုနှင့် ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများ သတ္ထုတွေက လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို စုပ်ယူပါတယ်။ WiFi က လျှပ်စစ်သံလိုက် လှိုင်းကို ထုတ်လွှတ်တဲ့ အတွက် သတ္ထုမျက်နှာပြင် ဒါမှမဟုတ် သတ္ထုပစ္စည်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေက လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေကို ဟန့်တားနေမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် WiFi စက်ကို သတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ ဝေးရာမှာ … Read more
သရုပ်ဆောင်မိုးဟေကိုနှင့် လင်မယားအဖြစ်မှ ကွာရှင်းခဲ့တဲ့ ညီညီထွန်း မှ အများသိစေရန် ကြေညာလိုက်ပြီ..
သရုပ်ဆောင်မိုးဟေကိုနှင့် လင်မယားအဖြစ်မှ ကွာရှင်းခဲ့တဲ့ ညီညီထွန်း မှ အများသိစေရန် ကြေညာလိုက်ပြီ သရုပ်ဆောင်မိုးဟေကိုနှင့်လင်မယားအဖြစ်မှကွာရှင်းခဲ့သည့်ညီညီထွန်းမှအများသိစေရန်ကြေညာထည့်ဖော်ပြ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့မင်းသမီးချောလေးမိုးဟေကိုကတော့အနုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်မှုရရှိထားသလို ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာလည်းရိုတ်ကူးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးဟေကိုကတော့မကြာသေးခင်ကခင်ပွန်းဟောင်းဦးညီညီထွန်းနဲ့တရားဝင်ကွာရှင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်မိုးဟေကိုနှင့်လင်မယားကွာရှင်းရာ တရားရုံးတွင်တရားရင်ဆိုင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည့်ဦးညီညီထွန်းသည်တရားရုံးမှတဝက်စီခွဲယူရန်သဘောတူထားသည့် အိမ်အားမိုးဟေကိုမှတစ်ဦးတည်းသဘောဖြင့်ပြင်ဆင်နေမှုအားရပ်တန့်ရန်သတင်းစာတွင်ကြေငြာထည့်ကန့်ကွက်။ ယခုအခါယင်းအမိန့်ဒီကရီကိုနေပြည်တော်၊ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ချူပ်သို့အယူခံအဆင့်ဆင့်ဝင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းတရာလွှတ်တော်၏အမိန့်ဒီကရီကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်၍ယင်းအမိန့်အတိူင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါသည်။ Unicode သရုပျဆောငျမိုးဟကေိုနှငျ့ လငျမယားအဖွဈမှ ကှာရှငျးခဲ့တဲ့ ညီညီထှနျး မှ အမြားသိစရေနျ ကွောညာလိုကျပွီ သရုပျဆောငျမိုးဟကေိုနှငျ့လငျမယားအဖွဈမှကှာရှငျးခဲ့သညျ့ညီညီထှနျးမှအမြားသိစရေနျကွညောထညျ့ဖျောပွ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုအပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့မငျးသမီးခြောလေးမိုးဟကေိုကတော့အနုပညာနယျပယျမှာအောငျမွငျမှုရရှိထားသလို ကိုယျပိုငျထုတျလုပျရေးလုပျငနျးလုပျပွီးရုပျရှငျဇာတျကားပေါငျးမြားစှာလညျးရိုတျကူးပေးနတောဖွဈပါတယျ။ မိုးဟကေိုကတော့မကွာသေးခငျကခငျပှနျးဟောငျးဦးညီညီထှနျးနဲ့တရားဝငျကှာရှငျးထားတာလညျးဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျမိုးဟကေိုနှငျ့လငျမယားကှာရှငျးရာ တရားရုံးတှငျတရားရငျဆိုငျအနိုငျရရှိခဲ့သညျ့ဦးညီညီထှနျးသညျတရားရုံးမှတဝကျစီခှဲယူရနျသဘောတူထားသညျ့ အိမျအားမိုးဟကေိုမှတဈဦးတညျးသဘောဖွငျ့ပွငျဆငျနမှေုအားရပျတနျ့ရနျသတငျးစာတှငျကွငွောထညျ့ကနျ့ကှကျ။ ယခုအခါယငျးအမိနျ့ဒီကရီကိုနပွေညျတျော၊ပွညျထောငျစုလှတျတျောခြူပျသို့အယူခံအဆငျ့ဆငျ့ဝငျခဲ့ပွီးရနျကုနျတိုငျးတရာလှတျတျော၏အမိနျ့ဒီကရီကိုအတညျပွုခဲ့ပွီးဖွဈ၍ယငျးအမိနျ့အတိူငျးဆကျလကျဆောငျရှကျနကွေောငျးသိရပါသညျ။ သရုပျဆောငျမိုးဟကေိုနှငျ့ လငျမယားအဖွဈမှ ကှာရှငျးခဲ့တဲ့ ညီညီထှနျး မှ အမြားသိစရေနျ ကွောညာလိုကျပွီ သရုပျဆောငျမိုးဟကေိုနှငျ့လငျမယားအဖွဈမှကှာရှငျးခဲ့သညျ့ညီညီထှနျးမှအမြားသိစရေနျကွညောထညျ့ဖျောပွ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုအပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့မငျးသမီးခြောလေးမိုးဟကေိုကတော့အနုပညာနယျပယျမှာအောငျမွငျမှုရရှိထားသလို ကိုယျပိုငျထုတျလုပျရေးလုပျငနျးလုပျပွီးရုပျရှငျဇာတျကားပေါငျးမြားစှာလညျးရိုတျကူးပေးနတောဖွဈပါတယျ။ မိုးဟကေိုကတော့မကွာသေးခငျကခငျပှနျးဟောငျးဦးညီညီထှနျးနဲ့တရားဝငျကှာရှငျးထားတာလညျးဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျမိုးဟကေိုနှငျ့လငျမယားကှာရှငျးရာ တရားရုံးတှငျတရားရငျဆိုငျအနိုငျရရှိခဲ့သညျ့ဦးညီညီထှနျးသညျတရားရုံးမှတဝကျစီခှဲယူရနျသဘောတူထားသညျ့ အိမျအားမိုးဟကေိုမှတဈဦးတညျးသဘောဖွငျ့ပွငျဆငျနမှေုအားရပျတနျ့ရနျသတငျးစာတှငျကွငွောထညျ့ကနျ့ကှကျ။ ယခုအခါယငျးအမိနျ့ဒီကရီကိုနပွေညျတျော၊ပွညျထောငျစုလှတျတျောခြူပျသို့အယူခံအဆငျ့ဆငျ့ဝငျခဲ့ပွီးရနျကုနျတိုငျးတရာလှတျတျော၏အမိနျ့ဒီကရီကိုအတညျပွုခဲ့ပွီးဖွဈ၍ယငျးအမိနျ့အတိူငျးဆကျလကျဆောငျရှကျနကွေောငျးသိရပါသညျ။
မင်ျဂလာဆောငျအကွိုဓာတျပုံရိုကျဖို့ စဉျးစားရခကျနတေဲ့ ဂေါငျးကွီးတို့အတှကျ(FAမြားမပါ)
မင်ျဂလာဆောငျအကွိုဓာတျပုံရိုကျဖို့ စဉျးစားရခကျနတေဲ့ ဂေါငျးကွီးတို့အတှကျ(FAမြားမပါ) ဖိလဈပိုငျနိုငျငံမှ ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးသညျ သူတို့ဧ။ျ မင်ျဂလာဆောငျအကွိုဓာတျပုံကို ထူးခွားစှာဖွငျ့ မွှဟေောကျတဈကောငျနှငျ့ အတူတူတှဲရိုကျခဲ့သညျ့အတှကျ လူမှုကှနျယကျတဈခုလုံးကို ဂယကျထသှားစခေဲ့သညျ။ သူတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးသညျ ထိတျလနျ့ဖှယျ မွှဟေောကျတဈကောငျကို ကိုငျထားပွီး မကျြနှာခငျြးဆိုငျအနအေထားနှငျ့ မွှကေိုအနမျးပေးနသေညျ့ ပိုဈ့မြိုးပေးကာ မကွောကျမလနျ့ ပြျောရှငျစှာ ရိုကျခဲ့ကွသညျ။ ထိုဓာတျပုံမြားကို လိုငျးပျေါတှငျ တငျခဲ့ပွီးနောကျ အမြားမှ ကွံကွံဖနျဖနျ ရိုကျခဲ့ကွ၍ မင်ျဂလာမဆောငျရသေးခငျ မွှကေိုကျပွီးလြှောနအေုံးမညျဟုဆိုကာ အခြို့ကြ ကိုယျ့ဒုက်ခကို ရှာနတေယျဟု ပွောဆိုဝဖေနျခဲ့ကွသညျ။ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံမှ ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးသညျ သူတို့ဧ။ျ မင်ျဂလာဆောငျအကွိုဓာတျပုံကို ထူးခွားစှာဖွငျ့ မွှဟေောကျတဈကောငျနှငျ့ အတူတူတှဲရိုကျခဲ့သညျ့အတှကျ လူမှုကှနျယကျတဈခုလုံးကို ဂယကျထသှားစခေဲ့သညျ။ သူတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးသညျ ထိတျလနျ့ဖှယျ မွှဟေောကျတဈကောငျကို ကိုငျထားပွီး မကျြနှာခငျြးဆိုငျအနအေထားနှငျ့ မွှကေိုအနမျးပေးနသေညျ့ ပိုဈ့မြိုးပေးကာ မကွောကျမလနျ့ ပြျောရှငျစှာ ရိုကျခဲ့ကွသညျ။ ထိုဓာတျပုံမြားကို လိုငျးပျေါတှငျ … Read more
မိန်းမရှိရက်သားနဲ့ Facebook ပေါ်တက် ရည်းစားထားနေကြတဲ့ ချီးထုတ်များကို ဒဲ့ ပြောချင်တယ်
သားကြီးမယားကြီး ရှိရက်သားနဲ့ Facebook ပေါ်တတ် ရည်းစားထားနေကြသော ချီးထုတ်များကို ဒဲ့ ပြောပါမယ်။ မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ဖုန်းကောက်ကိုင် မေားနင်း……ချစ် မောနင်း……သဲလေး ဘာလုပ်နေလဲ?? အိမ်ကမိန်းမကိုတော့ ချက်စရာ ဆန်ရှိရဲလားကျ မမေးဘူး။ ညည ကိုယ့်ကို အိမ်မက်ထဲ ထည့်မက်ရဲ့လားမေး။ အိမ်ကမိန်းမ ညက ခလေးဂျီကျလို့ တစ်ညလုံးမအိပ်လိုက်ရတာ ကျတော့ မသနားဘူး။ ချစ်ခလေး….နေမကောင်းဘူးလား ဘာစားသေးလည်း? ဆေးသောက်ပြီးပြီးလား? မသက်သာရင် ဆေးခန်းလိုက်ပြပေးမယ်နော် ဘာမှမပူနဲ့….ကိုကိုရှိတယ်လုပ်။ အိမ်ကမိန်းမ နေမကောင်းဖြစ်လို့ ဆေးသောက်ပြီးပြီးလား မေးဖော်မရဘူး။ သက်သာလားတောင် နည်းနည်းမမေးဖော်မရဘူး။ အားတာနဲ့ ဖုန်းကောက်ကိုင် Screen ကြီးကြည့် မျက်ခွက်က စပ်ဖြီးဖြီး ပြီးတီတီနဲ့။ အားဘွားမွမွ ပလွတ်ပလွတ် ပလပ်ပလပ်တွေ အရမ်းချစ်တယ် မခွဲချင်ဘူး တွေ့ချင်တယ် ရူးတော့မှာပဲ လုပ်။ ဒင်တို့ … Read more